Serivisy fametahana fitrandrahana - Cnc fandavahana Sina - Casting Minghe
Inona no atao hoe Cnc Drilling Process & Drilling Machining & - Drilling Services
Ny karazana masinina rehetra dia tsy azo atao raha tsy misy loaka. Mba hampifandraisana ireo faritra, takiana loaka isan-karazany, lavaka pin na lavaka rivet amin'ny habe samy hafa; mba hanamboarana ireo faritra ampita, ilaina ny lavaka fametahana isan-karazany; ny ampahany amin'ny masinina ihany koa dia manana lavaka maro samihafa (toy ny lavaka menaka, lavaka fanodinana, lavaka mampihena ny lanja sns). Ny fiasan'ny milina lavaka hahatonga ny lavaka hahafeno ny fepetra takiana dia antsoina hoe machining hole.
Ny haavon'ny lavaka anatiny dia iray amin'ireo sehatra manan-danja izay mandrafitra ireo faritra mekanika. Amin'ny faritra mekanika, ny faritra misy lavaka amin'ny ankapobeny dia mitentina 50% ka hatramin'ny 80% amin'ny totalin'ny ampahany. Ny karazana lavaka koa dia isan-karazany, ao anatin'izany ny lavaka silindrano, ny lavaka conical, ny lavaka misy kofehy ary ny lavaka miendrika endrika.
Ny lavaka varingarina mahazatra dia tsy mitovy amin'ny lavaka ankapobeny sy lavaka lalina, ary sarotra ny milina ny lavaka lalina.
Ny serivisy fametahana milina ao Minghe dia nampiana tany am-boalohany mba hidera sy hanohanana ny fahaizantsika mamorona. Androany, ny mpanjifa dia mampiasa ny indostria mitarika fandavahana ary na dia tsy ilaina aza ny fananganana. Nandritra ny 35 taona dia nivoatra ny serivisinay fandavahana izahay mba hanomezana vahaolana ho an'ny mpanjifa amin'ny fampiharana manokana azy ireo. Ny injenieran'ny Minghe dia hijery ny famaritana ny vokatra, ny antso an-tariby ary ny fitakiana volume mba hisafidianana ny vahaolana mahomby indrindra amin'ny tetikasan'ny fandavahana anao.
Fepetra takiana amin'ny teknika fandavahana
Amin'ny dingan'ny fanodinana lavaka dia ilaina ny misoroka ny olana toy ny fanitarana ny savaivony lehibe be loatra, ny fahamendrehana eo amin'ny sehatry ny workpiece, ary ny fiakanjan'ny drill kely, mba hisorohana ny kalitaon'ny fandavahana sy hampitombo ny fikarakarana. vidiny. Ireto fepetra takiana manaraka ireto dia tokony ho azo antoka araka izay azo atao:
- Fahamarinan'ny refy: ny maha-marina ny savaivony sy ny halalin'ny lavaka;
- Fahamarinan'ny endrika: boribory lavaka, varingarina ary fahitsian'ny axis;
- Fahamarinan-toerana: ny fifampitondrana eo anelanelan'ny lavaka sy ny axis an'ny lavaka na ny axis an'ny faribolana ivelany; ny fampitoviana sy ny perpendicularité eo amin'ny lavaka sy ny lavaka na ny lavaka sy ny faritra hafa, sns.
Mandritra izany fotoana izany dia tokony hodinihina ireto singa 5 manaraka ireto:
- Ny firafitry ny lavaky ny lavaka sy ny lavaka fahasarotana ambonimbony;
- Ny toetra mampiavaka ny workpiece, ao anatin'izany ny fahamarinan-toerana amin'ny clamping overhang sy ny rotatability;
- Ny hafainganam-pandeha, ny rafitra coolant ary ny fahamarinan-toeran'ny fitaovan'ny milina;
- Andiana fikarakarana;
- Vola fanodinana;
Karazana milina fandotoana samihafa - Serivisy fandavahana Cnc azo alaina ao Minghe
Ny lavaka maro samihafa amin'ny faritra bobongolo, toy ny loaka visy, loaka visy, lavaka pin, lavaka mandrel, lavaka fametahana fototra, sns., Dia mila atsofohy ary alefa indray hamenoana ny fepetra takian'ny savaivony amin'ny lavaka, ny fahitsiana ary ny hamafin'ny lava-bato.
Ny fomba fanodinana ampiasaina matetika dia aseho eo amin'ny latabatra.
Fitrandrahana ampahany tokana Ny ampahany tokana dia atsofoka mivantana araky ny toerana fanamarihana
Drill Pilot Manaova lavaka amin'ny faritra iray aloha, ary ampiasao ity ho toy ny torolàlana amin'ny fandavahana ny lavaka amin'ny faritra hafa. Ny ampahany iray dia azo ampiasaina amin'ny fandavahana mivantana amin'ny lalana mifanohitra amin'ny fandavahana; izy io koa dia afaka mitarika ny lavaka fandavahana hanaovana fandavahana ilay lalana mifanohitra.
Fitrandrahana kambana Mba hahazoana antoka ny halaviran'ny lavaka amin'ireo faritra, ny faritra roa dia azo fehezina amin'ny chuck mifanila na atambatra amin'ny visy mba hamorona iray manontolo, ary ny lavaka dia azo alefa amin'ny fotoana iray mifanaraka amin'ny marika.
Famerenana ny milina
Matetika misy lavaka pin, lavaka ejector, lavaka manamboatra fototra, sns. Amin'ny bobongolo izay mila zahana aorian'ny fanoratana na mandritra ny fivoriambe. Amin'ny ankapobeny dia ny IT6 hatramin'ny IT8 no fahitsiana ary ny henjana dia tsy latsaky ny Ra3.2μm.
Fitsipika ankapobeny momba ny fitondrana ny zoma
Savaivony workpiece Nitrandraka ary namboarin'i fitter
10 ~ 20 Fanodinana amin'ny alàlan'ny fandavahana, fanisan-damba, fanamboarana anarana sns.
> 20 Voafehin'ny fantsom-panafody alohan'ny fametahana, avy eo fikosoham-bary sy fanodinana milina
Mila mamono ny lavaka Rehefa mamerina manamboatra, ny habetsaky ny fikosoham-bary dia tokony ho 0.02 ~ 0.03. Ny fiarovana dia tokony harovana mandritra ny fitsaboana hafanana ary haidina indray rehefa mivory
Fampidirana reaming ny fitaovana samihafa Rehefa manamboatra ampahany amin'ny fitaovana samihafa dia tokony hatao amin'ny fitaovana sarotra kokoa ny famerenana amin'ny laoniny
Fanamafisana ny fanovana fitaovana Amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ireo fitaovana mafy orina dia zahao aloha raha tsy simba ilay lavaka, na miverina miorina amin'ny famerenan'ny karbida simenitra mahazatra, na mametaka reamerika taloha, ary avy eo mampiasa tsipika fikosoham-bary vy hikosehana ny habe takiana aminy
Loka reamed Rehefa tsy averina miova ny lavaka dia tokony hohalalina ny halalin'ny lavaka famerenana, avelao ny halavan'ny ampahany fanapahana ny reamer mba hahazoana antoka ny savaivony mahomby amin'ny lavaka; izy io koa dia azo averina namboarina tamina famerenarana mahazatra, ary avy eo mamerina ny lavaka amin'ny fametahana taloha izay nanapotika ny tapany. Ambany ambany
Masinina Rehefa avy nofehezina indray mandeha ny workpiece dia tanterahina tsy tapaka ny fandavahana, ny fikajiana ny isa ary ny famerenana amin'ny laoniny mba hahazoana antoka fa maharitra sy mifanindry ny lavaka
Ny lavaka fantsona mangatsiaka, ny lavaka fanafanana ary ny ampahany amin'ny lavaka pin ejector ao anaty lasitra plastika dia mila alamina lavaka lalina. Amin'ny ankapobeny, ny fahamarinan'ny lavaka mangatsiaka dia tsy avo, fa ilaina mba hisorohana ny fiviliana; mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny famindrana hafanana, ny lavaka fanafanana dia manana fepetra takiana amin'ny savaivony sy ny hamafin'ny lavaka, ny savaivon'ny lavaka dia 0.1 ～ 0.3mm lehibe kokoa noho ny tehina fanafanana, ary ny hamafiny dia Ra12.5 ～ 6.3 μm; raha mitaky ambaratonga avo kokoa ny lavaka ejector, ny IT8 no tena marina, ary misy ny fepetra takiana amin'ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana.
Ny lavaka maro amin'ny bobongolo dia takiana mba hahazoana antoka ny elanelan'ny lavaka, ny elanelan'ny sisin'ny lavaka, ny fitovizan'ny axis an'ny lavaka tsirairay, ny fahamendrehana amin'ny tarehy farany, ary ny fiarahan'ny lavaka aorian'ny fitambaran'ny ampahany roa. Ity karazana rafitra lavaka ity dia mazàna no alamina aloha, ary avy eo ny loaka dia voahodina amin'ny alàlan'ny fanoratana.
Safidio ny dingana fitrandrahana tsara indrindra
Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hahitanao ny fomba ahafahan'ny olona, ​​fitaovana ary fitaovanay mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikadinao fandavahana.